Jaamacadda City oo arday usoo bandhigtay adeegeeda waxbarasho (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jaamacadda City University ayaa maanta xarunta jaamacadda ku casuuntay ardayda ka soo baxeysa dugsiyada sare, si ay u arkaan agabka tacliinta iyo adeegyada waxbarasho ee loo diyaariyay, iyadoo booqashada ardayda ay ku yimaadeen Jaamacadda ay daba socoto xulashada Taqasusaadyada ay ka heli karaan Jaamacadda.
Jaamacadda City ayaa bilihii la soo dhaafay waday howlo talooyin loogu siinayo Ardayda dhameysatay Dugsiga Sare sidii ay u dooran lahaayeen kulyadaha kala duwan ee jaamacadda, isla markaana ay ula jaan-qaadi lahaayeen waxbarashada casriga ee dunida ka jirto.
In ka badan 350 arday oo ka socotay Dugsiga sare ee Mass too maanta soo booqday xarunta Jaamacadda, ayaa waxaa soo dhoweeyay madaxda, macalimiinta iyo shaqaalaha jaamacadda.
Ardayda ayaa booqatay dhamaan dhismaha jaamacadda, goobaha loo diyaariyay baraatikada iyo laab saynis iyo kumbuyuutaro aad u tayeysan, iyadoo ay hagayeen tobbonaan ka tirsan ardayda Jaamaccadda oo loo carbiyay soo dhaweynta iyo qaabilaadaha martida.
Sidoo kale waxey macallimiinta iyo Madaxda Jamacadda ardayda kala hadleen, kulana taliyeen sida ay u dooran lahaayeen taqasusyada qof waliba ku haboon yahay marka la eego awoodaha iyo rabitaanka ardayga maraxaladaha waxbarashada aas aasiga ah.
Madaxweyne Ku Xigeenka Jmacadda City Eng. Abdikarin Xassan Jaamac ayaa ballan qaaday in ardayda ka soo baxeysa dugsiyada sare sanad dugsiyeedkan 2015-2016 u diyaariyeen adeeg waxbarasho oo aad u sareeya oo ka kooban Macallimiin taqasusyo sare iyo qibradba u leh maadooyinka ay bixinyaan, adeeg teknooloji oo casri ah, adeegyada baraatikada iyo manhaj tayeysan.
Waxaa kaloo loo balan qaaday ardayda gala kaalimaha 1aad imtaxaannada kama dambeysata ah in la siin doon deeq waxbarasho oo 4-sano ah lacag la’aan, waxa intaa dheer in ardayda ku baasa imtixaanka qabuulka Jaamacadda darajada A in iyagana heli doonaan deeq waxbarasho.
FAO: 5 Milyan xoolo ah ayey Soomaaliya sanadkii 2014 u iib geysay dalalka Carabta